Fomba famafana ny tonon-taolana | Bezzia
Toñy Torres | 16/09/2021 10:00 | an-trano
Ny fanadiovana tsy tapaka dia tsy ampy hanafotsy ny tonon-taolana, satria manangona menaka, loto ary residue isan'andro fa tsikelikely izy ireo dia manamaizina ny firaisan'ny taila. Na ireo mandeha amin'ny tany na izay apetraka amin'ny rindrin'ny trano fidiovana sy lakozia. Ny fanadiovana ara-dalàna dia tsy ampy hahatonga ny tonon-taolana hita ho madio sy tsy misy otrikaretina.
Ho an'izany dia ilaina ny mampihatra vokatra manokana sasany ary manokana fotoana hanaovana an'io asa manokana io. Na dia tsy zavatra tokony hatao matetika be aza izy io, arakaraka ny andaozanao ny tonon-taolana tsy misy fanadiovana no vao mainka sarotra aminao ny mamela azy ireo fotsy tanteraka avy eo. Miaraka amin'ireo torohevitra sy fanafody fanadiovana ireo, ity asa ity dia ho tsotra sy mora atao.
1 Fotsy fotsy
2 Fanafody an-trano hamotsiana ny tonon-taolana
2.1 Vinaingitra fotsy
Eny an-tsena dia afaka mahita vokatra marobe fanadiovana manokana ianao ho an'ity tanjona ity, na izany aza, vokatra misy singa simika maro izy ireo. Izany hoe, vokatra manimba, mampidi-doza amin'ny fahasalamana, ho an'ny biby fiompinao, ny zanakao raha misy ao an-trano ary ambonin'izany rehetra izany, ho an'ny tontolo iainana. Araka izany, Aleo foana mampiasa fanafody any an-trano, tsy dia atahorana ary mahomby ihany.
Mba hitandroana ny fahadiovan'ny taila sy hamirapiratra ary misy tonon-taolana fotsy dia ilaina ny manadio tanteraka indraindray. Raha avelanao hanangona eo anelanelan'ny taila ny loto, dia mety hitombo ny bakteria sy ny bobongolo ary mety hampidi-doza aza. Misoroka azy io dia somary mora ihany, tsy maintsy ataonao izay hahazoana manadio ireo gorodona sy taila tsy tapaka, indrindra amin'ny faritra mamorona hamandoana bebe kokoa, toy ny trano fidiovana.
Fanafody an-trano hamotsiana ny tonon-taolana
Betsaka ny vokatra ahafahanao mitazona ny tonon-taolana ho madio tokoa, fa ao an-trano dia ho hitanao izay ilainao rehetra. Fanadiovana vinaingitra fotsy, voasarimakirana sy bicarbonate, dia ireo akora voajanahary 3 mahomby sy mahomby indrindra azonao ampiasaina tsy ho an'ny taila ihany, fa hanadio izay faritra rehetra ao an-tranonao. Ireo no fanafody any an-trano mahomby indrindra amin'ny fampiraisana ny taolana.
Iray amin'ireo vokatra voajanahary mahomby indrindra amin'ny fanadiovana, nanomboka misy otrikaina afaka manala bakteria, tasy hamandoana na bobongolo, ankoatry ny famonoana otrikaretina voajanahary. Ho an'ity fampiasana ity dia tsy maintsy afangaro vinaingitra fotsy antsasaky ny kaopy amin'ny rano mafana ampahefatry ny rano ianao. Afangaroy amin'ny tavoahangy miaraka amin'ny «diffuser» ny tavoahangy hahafahanao mamafy ireo tasy sarotra indrindra, avelao izy hiasa mandritra ny 15 minitra ary hosorana tsara amin'ny borosy nify.
Vokatra izay tonga lafatra amin'ny fanesorana lasitra noho ny fananany fungicidal. Ankoatr'izay dia mety amin'ny fanesorana fofona tsy amin'ny efitrano ihany, fa amin'ny lamba toy ny rugs na ny sofa ihany koa. Mba hanadiovana ireo tonon-taolana dia tsy maintsy afangaroinao amin'ny rano mafana ny antsasaky ny kaopy soda. Ampio tsikelikely ny rano satria mila paty matevina ianao. Ampiasao borosy nify, afangaro amin'ny vongan-taolana ny fangaro.
Ny farany fa tsy ny kely indrindra amin'ireo mpanadio voajanahary mahomby indrindra. Ny voasarimakirana apetaka mivantana amin'ny vatan'ny taila dia afaka manala ny bobongolo, ny menaka ary ny loto. Afangaro amin'ny ranom-boasarimakirana antsasaky ny kapoaky ny rano mafana. Ahosotra amin'ny valanaretina ary kosohy amin'ny spaonjy manala ny loto avy eo anelanelan'ny tonon-taolana.
Ny fitazonana ny trano ho madio sy milamina ary voadio dia asa tsy miova fa tena mitondra valisoa. Raha manao asa kely isan'andro koa ianao, dia hisoroka ny tsy tokony hampiasanao vola be amin'ny fanadiovana tanteraka. Ny mahavariana kokoa ny zava-drehetra, ny fahalavoan'ny junk tsy misy ilana azy, ny akanjo tsy ampiasaina intsony na ny sakafo tsy ilaina intsony, ho mora kokoa ny hitandrina ny zava-drehetra hadio sy ho voan'ny otrikaretina. Amin'izay ianao vao afaka mankafy ny soa ao an-tranonao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Fomba famafana ny tonon-taolana